Sirta Wasmada: Ninyahow haddii siilka naagtaadu kugu yaraado qaababkani samee adigoo adeegsanaya xubinkaaga taranka… - iftineducation.com
iftineducation.com – Dad badan oo kamida asxaabta ku xidhan Heegan24.net ayaa naga soo codsaday in aanu usoo bandhigno qaababka ay xubinta taran ka dumarka haddii ay ku yartahay ninka uu ku weyneyn karo isagoo adeegsanya qaabab dabiici ah.
Haddaba ninyahow waxanu hoos kugu soo bandhigi doona qaabab fudud oo siilka naagtada aad mid kugu filan aad ka dhigi karto oo aad uweyneyn karto waxana kuu sahlaysha shabakada arrimaha iftineducation.com hoos ka akhriso dhowrka qodob ee kuu muhiimka ah.
1:inta galmada aad ku gudo jirto isku day in aanad kasarin guska in mudo ah markasta oo galmada aad sameynaysaan.
2:waxad soo iibsata gus ka caaga ah ee electrik ga ah kaaso oo kolba dhinac islu rogaya waxana loogu tala galay in xubinka dumarka lagu balaadhiyo waxad ka helaysa dukaamada qalabka wasmada oo kuyaalo yurub iyo africada horumartayba.
3:habeenkasta saliid olive waan in aad marisa siil naagta galmada kahor
saddexdaasi qodob haddii aad ku dadaassho waxaa hubaal ah in naagtaadu ay siil aad ku qanacdo yeelan doonto.
Shah Rukh Khan Oo Jeclaan Lahaa Sida Ay Hrithik Roshan Inuu Jirkiisa U Dhisnaado!